Semalt एसईओ उत्पादकता युक्तिहरु: कम थकान, अधिक एसईओ परिणाम!
यदि तपाइँ कहिल्यै व्यक्तिगत प्रभाव को विषय मा रुचि राख्नुभएको छ, निस्सन्देह तपाइँ "उत्पादकता" जस्तै एक शब्द भर मा आउनुभएको छ। यो गर्न को लागी एक स्पष्ट परिभाषा दिन गाह्रो छ, तर, छोटो मा, यो समय को एक निश्चित अवधि को लागी परिणाम को एक निश्चित राशि उत्पादन गर्न को लागी एक विशेष व्यक्ति को क्षमता हो।
SEO को बारे मा, यो हुन सक्छ:
अर्थशास्त्र को मात्रा हो कि एक विशेषज्ञ प्रक्रिया गर्न सक्नुहुन्छ (फिल्टर, क्लस्टरिंग, आदि);
परियोजनाहरु को संख्या कि अनुकूलक चल्न सक्छ;
समय नियमित कार्यहरु को समाधान मा खर्च;
तपाइँ पहिले नै बुझिसक्नु भएको छ, एक व्यक्तिको उत्पादकत्व को स्तर कति मेहनत र समय/उनी/उनी एक निश्चित परिणाम प्राप्त गर्न मा खर्च गर्दछ मा निर्भर गर्दछ। तेसैले हाम्रो समय मा, यो बिल्कुल हामी प्रत्येक को लागी महत्वपूर्ण छ।
साँचो, एक महान इच्छा को उपस्थिति को बावजूद, सबै को लागी आफ्नो उत्पादकता बढाउन मा सफल छैन। यद्यपि यस बारे मा केहि पनी गाह्रो छैन - तपाइँ केवल केहि सरल सुझावहरु को पालन गर्न को लागी आवश्यक छ कि हामी यस पोस्ट मा तपाइँ संग साझा गर्नेछौं।
एसईओ उत्पादकता दिशानिर्देश
हाम्रा पाठकहरु को अधिकांश अनुकूलक अभ्यास गर्दै छन्, व्यञ्जनहरु आफैलाई थोरै खाता मा यो विशेष सुविधा लिई समायोजित गरीएको छ। जे होस्, नियमहरु को अधिकांश अपनाईन्छ कुनै फरक पर्दैन वास्तवमा तपाइँ के गर्नुहुन्छ।
चुनौतीपूर्ण कार्यहरु पहिले आउनुहोस्!
हाम्रो प्रकृतिको यस्तो विशेषता छ जबसम्म सम्भव भएसम्म गाह्रो र पुरा तरिकाले सुखद काम को प्रदर्शन ढिलाइ गर्न को लागी हो। नतिजाको रूपमा, समय कहिल्यै पर्याप्त छैन, समय सीमा असफल छन्, र परेशानी ग्यारेन्टी छ।
र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, कहिले काहिँ, समस्या को मात्र यस प्रकार को हल बिना, प्रभावी थप काम असम्भव छ। उदाहरण को लागी, SEO मा, यो प्राविधिक त्रुटिहरु फिक्सिंग, प्रतिस्पर्धीहरुको विश्लेषण, र अर्थशास्त्र बाहिर काम।
हो, यो लामो र निराशाजनक छ, र त्यहाँ पनी दुनियाँ मा धेरै मानिसहरु छन् जो हजारौं कीवर्डहरु को प्रशोधन र "लिपि" स्क्रिप्ट को हजारौं को आनन्द लिन्छन्। तर, कुनै पनि अप्टिमाइजर सहमत हुनेछ कि त्यहाँ बिना कुनै बाटो छैन।
यदि तपाइँ विपरीत गर्नुहुन्छ, र सबै भन्दा पहिले सबैभन्दा गाह्रो समस्याहरु संग सम्झौता, परियोजना मा बिताएको आवश्यक समय अनुमान, यो तपाइँको लागी धेरै सजिलो हुनेछ। र मुड सधैं राम्रो हुन्छ यदि तपाइँ जान्नुहुन्छ कि सबैभन्दा गाह्रो कुरा समाप्त भयो।
कलाकारहरु को लागी एक प्राविधिक कार्य फारम: «« गर्न को लागी सूची »
विस्तृत निर्देश र प्राविधिक विनिर्देशों को उपस्थिति कलाकारहरु संग अन्तरक्रिया बिताएको समय कम गर्दछ। विवरण को व्याख्या र कार्यान्वयन को बारीकियों को अनुमोदन समय बर्बाद गर्न को लागी कुनै आवश्यकता छैन किनकि यो सबै पहिले नै कागजात मा लेखिएको छ।
एसईओ मा, को रूप मा यस्तो उपकरण DSD काम को एक संख्या प्रदर्शन गर्दा प्रयोग गर्न सकिन्छ:
अर्थ कोर को संग्रह;
अवतरण पृष्ठहरु को अनुकूलन;
हो, बिरलै अब कोहि बिना TK काम गरीरहेछ, तेसैले, हामी यो आवश्यक छ कि हामी टेम्प्लेट TK जस्तै केहि बारे मा कुरा गरीरहेछौं भन्ने कुरामा जोड दिन आवश्यक छ। उदाहरण को लागी, तपाइँ काम को क्षेत्रहरु को प्रत्येक को लागी मानक टेक्निकल विशिष्टताहरु तयार गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा यो केवल व्यक्तिगत तत्वहरु लाई परिवर्तन गर्न को लागी पर्याप्त हुनेछ - शीर्षक, संख्या, उदाहरण, वा अन्य डाटा।
नतिजाको रूपमा, तपाइँलाई मात्र ठेकेदारलाई कागजात हस्तान्तरण गर्न आवश्यक छ, र तपाइँ अब स्पष्टीकरण द्वारा विचलित हुन सक्नुहुन्न, तर तपाइँको कार्यहरु को बारे मा जानुहोस्।
तपाइँको दिनचर्या स्वचालित गर्नुहोस्
बस सोच्नुहोस् कि कति एसईओ कार्यहरु त्यहाँ छन् कि धेरै समय लिन्छन् र कुनै विशेष कौशल को आवश्यकता छैन। यसबाहेक, यो पनि कौशल को बारे मा छैन, तर एकरूपता र यस्तो काम को दोहोर्याउने को बारे मा।
उदाहरण को लागी, एक जस्तै चीजहरु लिनुहोस् एक वेबसाइट को प्राविधिक लेखा परीक्षा, एक अर्थ कोर स collecting्कलन, र ग्राहकहरु को लागी रिपोर्ट लेखन। हाम्रो अभ्यास मा समान कार्यहरु या त नियमित रूपमा गरिन्छ, वा कम्तीमा धेरै पटक।
अब गणना कति समय मात्र एक ग्राहक रिपोर्ट मा मासिक खर्च गरीन्छ, प्रति परियोजना को बारे मा १ घण्टा को गणना संग, र परियोजनाहरु आफैं दुई दर्जन वा बढी छन्। कुल मा, हामी प्रति महिना दुई काम दिन शून्य छ!
यदि तपाइँ यो प्रयोग गर्नुहुन्छ समर्पित एसईओ ड्यासबोर्ड यी प्रयोजनहरु को लागी, उही काम १० मिनेट लाग्नेछ, र यो खाता मा समय ग्राहकहरु लाई रिपोर्ट पठाउन मा खर्च गरीरहेको छ।
र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हामी विशिष्ट तथ्या्कहरु को बारे मा कुरा गरीरहेका छौं कि हामीले हाम्रो आफ्नै अनुभव बाट प्राप्त गरेका छौं किनकि हामीले जनता को लागी सेवा जारी गर्नु अघि हाम्रो आफ्नै छाला मा सबै कुरा जाँच गर्यौं। वास्तव मा, हाम्रो सेवा यो "पीडा" बाट बढ्यो।
एउटै लेखापरीक्षण संग मुद्दा सजीलै को मद्दत संग हल गर्न सकिन्छ समर्पित एसईओ ड्यासबोर्ड।
कार्यमा फोकस गर्नुहोस्
स्काइप मा, त्यहाँ "बाधा नगर्नुहोस्" स्थिति को रूप मा एक उपयोगी चीज हो, र सामाजिक सञ्जाल बाट, काम गर्दा, यो बिल्कुल केहि नछोड्नु राम्रो छ। कुनै अधिसूचना वा गलत समयमा पठाइएको सन्देश फोकस बाट बाहिर लैजानेछ, र यो तपाइँको एकाग्रता पुनः प्राप्त गर्न समय लिनेछ।
साथै, विशेष कार्य प्रबन्धकहरु र सेवाहरु मा ध्यान दिनुहोस् कि कार्यहरु को प्रबंधन र उनीहरु मा प्रगति ट्र्याक गर्न मा मद्दत गर्नुहोस्। आईटी पेशेवरहरु र अनुकूलकहरु को लागी, जस्तै समाधान Todoist.com र Trello.com सिद्ध छन्।
यदि यो तपाइँलाई लाग्छ कि तपाइँ उत्पादक रूप मा काम गर्न सक्नुहुन्छ, एकै समयमा धेरै कार्यहरु बाट विचलित हुँदै (फेसबुकमा पत्राचार सहित), मलाई विश्वास गर्नुहोस्, यो मात्र तपाइँलाई लाग्छ। र तपाइँ मध्ये धेरै डराउनुहुन्छ यदि तपाइँ तपाइँको कम्प्युटर मा एक गतिविधि ट्रयाकर कार्यक्रम स्थापित गर्नुभयो, र तब, महिना को अन्त्य मा, कति समय लाग्छ कि यो बकवास को सबै प्रकार गर्न को लागी लिईन्छ।
सानो कदम चाल्नुहोस्
मलाई थाहा छैन यदि तपाइँ तुरुन्तै बुझ्नुभयो कि यो के बारे मा थियो वा थिएन, तर, यो रहस्यमय रूपक अन्तर्गत, मेरो मतलब एक साधारण सोचाई हो - सानो कार्यहरुमा ठूला -ठूला लक्ष्यहरु प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई तोड्नुहोस्। यसले मात्र समस्या को समाधान को दिशा मा सार्ने प्रक्रिया लाई अधिक स्पष्ट रूप बाट प्रतिनिधित्व गर्न को लागी अनुमति दिन्छ, तर यो पनि विशुद्ध मनोवैज्ञानिक असुविधा को हटाउन को लागी एक व्यक्ति जब अनुभव गर्न को लागी भारी काम संग सामना गर्न सक्छ।
उदाहरण को लागी, यदि एक ठूलो अनलाइन स्टोर पदोन्नति को लागी तपाइँ को लागी आए, धेरै कोटिहरु र उत्पादनहरु को हजारौं को दसियों संग। यहाँ सबै कुरा एकैचोटि गर्न को लागी समय को एक अप्रभावी बर्बाद हुनेछ।
एक अधिक उचित विकल्प को कामहरु को एक सामान्य चेकलिस्ट कोर्नु हो, र त्यसपछि यो ब्लक मा तल तोड्नुहोस् र चरणहरुमा प्रदर्शन।
एक सिद्धान्त मा समय बर्बाद नगर्नुहोस् तपाइँ थाहा छैन जब तपाइँ यसलाई लागू गर्नुहुनेछ। यो सबै समय नयाँ चीजहरु जान्न को लागी आवश्यक छ, र त्यो बिना पनि, हाम्रो क्षेत्र मा केहि छैन। तर सबै भन्दा राम्रो छ जब तपाइँ नयाँ ज्ञान प्राप्त वर्तमान समस्याहरु लाई हल गर्न को लागी। यस्तो कौशल बिल्कुल निश्चित छन्, र सामान्य मा, अभ्यास नियम हो।
यदि एक मात्र सैद्धान्तिक जानकारी अवशोषित र व्यवहार मा लागू गर्दैन, यस्तो ज्ञान चाँडै बिर्सिएको छ। यो भन्न सकिँदैन, पक्कै, यो समय को एक बिल्कुल बेकार बर्बाद हो। तर, तथ्य यो हो कि यो राम्रो संग प्रयोग गर्न सकिन्छ निश्चित को लागी हो।
लागू सफ्टवेयर मा एउटै अध्ययन गरौं। कुञ्जी कलेक्टर एक्लै को लागी, तपाइँ धेरै दर्जन पृष्ठहरु को लागी मैनुअल पाउन सक्नुहुन्छ। र जे होस् तपाइँ उनीहरुलाई राती हरेक दिन पुन: पढ्नुहुन्छ, यदि तपाइँ अभ्यासमा एकै पटकमा सबै चीजको परीक्षण गर्नुहुन्न, एक काम गर्ने परियोजना अनुसार, केहि पनि तपाइँको टाउकोमा रहनेछैन।
एक समान उदाहरण को लागी एक पनी सेवा मा काम गर्न को लागी तपाइँ पनी दर्ता हुनुहुन्न भन्ने बारे मा सोधिने प्रश्नहरु पढ्न को लागी हो। जे होस् तपाइँ कती पढ्नुहुन्छ, भित्र के छ अझै पनी स्पष्ट छैन।
प्राथमिकता: प्राथमिकता गर्न जान्नुहोस्
यो सम्भव छैन कि हाम्रा पाठकहरु बीच त्यहाँ भाग्यशाली छन् जो एक काम दिन मा मात्र दुई वा तीन कार्यहरु लाई हल गर्न को लागी हुनेछ। सम्भवतः, तपाइँको चेकलिस्ट मा उनीहरुका दर्जनहरु छन्, र काम को स्टक बर्ष को अर्को जोडी को लागी पर्याप्त भन्दा बढी हुनेछ। तेसैले, यो तथ्यलाई स्वीकार गर्नुहोस् कि तपाइँ समय मा सबै गर्न सक्नुहुन्न, र केवल प्राथमिकता दिन को लागी पहिले के गर्नु पर्छ र पछि के को लागी स्थगित गर्न को लागी प्रयास गर्नुहोस्।
यदि हामी कुरा गर्छौं वेबसाइट पदोन्नति, त्यसपछि एक विस्तृत लेखा परीक्षा संचालन र त्रुटिहरु लाई हटाउने, एक सिमेन्टिक कोर संकलन (सबै कुरा को आधार) स्पष्ट रूप मा एक उच्च प्राथमिकता हुनु पर्छ, उदाहरण को लागी, डिजाइन समाप्त र खोज परिणाम को टुक्राहरु को लागी कुनै "tweaks" जोड्नु पर्छ।
तर, पहिले नै उल्लेख गरीएको छ, राम्रो प्राविधिक विनिर्देशों र निर्देशन को एक सेट संग, धेरै एकै समयमा गर्न सकिन्छ, मात्र काम मा अन्य व्यक्तिहरु लाई संलग्न गरेर।
आराम धेरै महत्त्वपूर्ण छ
हामी रोबोट होइनौं। जे होस्, सबैभन्दा उन्नत टेक्नोलोजी असफल हुन्छ यदि यो अत्यधिक शोषण गरीन्छ। त्यसैले आराम मात्र काम को रूप मा महत्त्वपूर्ण छ। अझ धेरै, कसरी उत्पादक तपाइँ पछि काम गर्नुहुन्छ कसरी तपाइँ पुरा तरिकाले आराम मा निर्भर गर्दछ।
यो केवल शारीरिक विश्राम को बारे मा छैन - मस्तिष्क को पनि एक रिबुट को जरूरत छ। हामी प्रत्येक हाम्रो आफ्नै तरीका हो, जो मस्तिष्क स्विच गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो तरीका हो। केहि को लागी, यो यात्रा हो, अरु को लागी, एक मनपर्ने शौक। र केहि मानिसहरु को लागी, केवल श्रृंखला हेर्न को लागी पर्याप्त छ, मुख्य कुरा यो भन्दा पहिले बियर को एक राम्रो आपूर्ति किन्न बिर्सनु छैन!
परिणाम मापन, समय बिताएको छैन!
सूची बाहिर निकलीयो धेरै ठूलो छैन। तर, मलाई विश्वास गर्नुहोस्, बिन्दुहरु मध्ये प्रत्येक यसको आफ्नै तरीका मा महत्वपूर्ण छ। हामी तपाइँलाई आश्वासन दिदैनौं कि उनीहरुलाई अभ्यास मा राखे पछि, तपाइँ तुरुन्तै तपाइँको उत्पादकत्व कौशल pump० %लाई पम्प गर्नुहुनेछ। तर, तथ्य यो छ कि स्थिति अझ राम्रो को लागी परिवर्तन हुनेछ, र तपाइँ यी परिवर्तनहरु लाई नोटिस गर्नुहुनेछ निर्विवाद छ।
दक्षता मा सुधार गर्न मा सफल हुन को लागी, यो एसईओ वा कुनै अन्य काम मा हो, तपाइँ एक साधारण कुरा जान्न को लागी आवश्यक छ: उत्पादकता तपाइँ कति काम गर्नुभयो भन्ने बारे मा छैन, यो तपाइँ कती गर्नुभयो बारे मा छ। र त्यसपछि यो धेरै सजीलो सेट लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न को लागी र महान नतिजाहरु जोडिन्छ।
SEO मा रुचि छ? मा हाम्रो अन्य लेखहरु को जाँच गर्नुहोस् Semalt ब्लग।